Dada sy Neny Enjehina vao mainka mamiratra
Tsy takona afenina ny antsojay mahazo ny fianakaviana Ravalomanana izay misy ambadika politika avokoa.
Nalaina ny tanin’ny Tiko eny Andohatapenaka ary nomena ny orinasa Frantsay Total kanefa ninia nangina i Marc Ravalomanana hatramin’izao. Nanirahana miaramila mirongo fiadiana teny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely, toeram-piasan-dRtoa Lalao Ravalomanana saingy nisafidy ny tsy hampiaka-peo ny ben’ny tanàna sy i Marc Ravalomanana vadiny sady mpanolotsaina manokana. Tsy tia korontana i Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany ka miezaka mandefitra hatrany amin’ny antsojay mahazo azy ireo. Arakaraka ny fahanginany anefa no toa vao mainka maharomotra ireo mpisopatra ka kotrehina avokoa izay zavatra rehetra hamotehana sy hanosoram-potaka azy ireo toy ny kajy maloto hanalana ny ben’ny tanàna hahafaha-mametraka PDS. Atahorana amin’ny lafiny rehetra i Marc Ravalomanana ka hatao izay hahaleo monina azy eto Madagasikara. Atokisan’ny vondrona iraisam-pirenena anefa izy ary ampy traikefa amin’ny fandresen-dahatra ny mpamatsy vola ka mahazo avara-patana hatrany. Ny vahoaka ihany koa eo hatrany manohana ka n’aiza n’aiza aleha dia hipoka olona avokoa. Miombom-po amin-dRavalomanana mianakavy hatrany ny Malagasy maro ka vao mainka mitombo hery sy mamiratra hatrany izy ireo na maro aza ny antsojay.